01h 011 Lockdown and Positivity / कथा ०११ सबै बन्दहुनु (बन्दाबन्दी ) र सकारात्मकता / 01z Previous Lessons / 01 Katunje | Soul Blossom Students ( www.SoulBlossomStudents.org )
कथा ०११: सबै बन्दहुनु (बन्दाबन्दी ) र सकारात्मकता / Story 011: LOCKDOWN AND POSITIVITY
कथा ०११: अचानक ( एक्कासी ) हरेक मानिसहरु (प्रत्येक व्यक्तिहरु ) घरभित्र बस्नुपरेको थियो -
मीरा नाम गरेकी १० एउटी वर्षिय केटी थिईन र उनका भाई अमिर ८ वर्षका थिए । ति दुबै एउटै विद्धालयमा पढ्थे जुन उनिहरुको घरबाट हिँडेर १५ मिनेटको दुरीमा पर्दथ्यो । उनिहरुका बुवा सधैं आफ्नो कामकोलागी एकभण्टाभन्दा बढी बसको यात्रागरेर शहरमा जानुपर्दथ्यो । आमाले सोचिन घरकोकाममात्र महत्वपूर्ण होईन, त्यसैले उनी २ ठाउँमा स्वयंसेवकको कामपनी गर्थिन। उनी हप्ताको १ दिन आफ्ना बच्चाहरु पढ्ने विद्धालयमा र अर्को अवकाश प्राप्त (सेवा निवृती ) भएका व्यक्तिहरु बस्नेघरमा हप्ताको १ पटक सहायतागर्न जान्थिन ।
तर के भएको थियो ?
त्यो बन्दाबन्दीको (लकडाउनको ) कारणले घरमा कस्तो अवस्था थियो ?
बुवालाईपनी यो मनपर्‍यो किनकी दिनदिनै लामो समयलगाएर यात्रागरेर काममा जानुपर्दैनथ्यो । घरबाटनै अफिसकोकाम कम्प्युटरमा गर्दथे । र आमालाईपनी यो मनपर्‍यो किनकी परिवारहरुसंग सधैं बस्न पाईेएकोथियो र दिनदिनै हतारिएर काममाजानुपर्ने आवश्यकता थिएन । परिवारहरु सबैजना घरमा बसेर रमाइलोगरी समयको उपयोग गरिरहेकाथिए । …......... तर २ हप्तापछी पहिलेजती रमाईलो भएकोथियो अब धेरै रमाईलो लाग्नछोड्यो । अब ४ हप्तापछी उनिहरु गुनासोगर्दै रिसाउनथाले । अमिर जो बन्दाबन्दिको शुरुमा धेरै खुशी थिए अब एकदमै धेरै आफ्ना शिक्षकहरु र साथिहरुलाई सँझिनथाल्यो र विद्धालयजान धेरै उत्सुक भयो ।
मीरा जो शुरुमा धेरै खुशी थिईन किनकी परिक्षा दिनुपरेकोथिएन, गृहकार्य यादगर्नुपरेको थिएन तर अहिले दिक्कलागेर फेरी कहिले विद्धालयजान पाईने हो भनेर भन्नथालिन । बुवापनी जो शुरुमा खुशीथिए, धेरैबेर टाढाको यात्रा गर्नुपरेको थिएन, आरामले आफ्नो काम कम्प्युटरमा घरबाटै गर्दथे, अब उनलाईपनी मनपर्न छोड्यो । उनलाई फेरी बसमा यात्रागरेर अफिसमा गएर फेरी साथीहरुसँग भेटगर्न चाहन्थे । र आमापनी पहिला सबै परिवारहरु घरमै छनभनेर खुशीथीइन, अब उनीपनि यो मनपराउन छोडिन । किनकी घरमा कुनै शान्त बातावरण थिएन । उनी बन्दाबन्दी भएकोबेला पहिलेको भन्दापनी झन व्यस्तहुने गर्थिन । र उनी फेरी ति २ ठाउँमा स्वयंसेवकको रुपमा कामगर्न जानचाहन्थिन । बन्दाबन्दी अझै ४ हप्ता सम्ममा सकिन नपाउँदै सरकारले फेरी अर्को ४ हप्ताकोलागी बन्दाबन्दीको समयतोकेर सबै व्यक्तिहरुलाई घरमै बस्न आदेश दिए किनकी जीवाणु अझै धेरै फैँलदै गएको थियो। ति परिवारका सबै सदस्यहरु अब धेरैनै निराश भएकाथिए ।
घरमा चिन्ता (मानसिक तनाव ) बढ्दोक्रममा थियो तर ...
त्यसपछी बुवा र भाई अमिर अलिक लज्जितभए र एक अर्काले मुखामुख गरे, त्यसपछी केहीपनी बोल्न सकेनन । किनकी मीराले पूर्णरुपले सही (ठिक ) भनेकीथीइन । त्यसपछी आमा खुशी भईन किनकी जे भएपनी परिवारमा १ जनाले त यो बन्दाबन्दिमा उनलाई कती कठिन भईरहेकोथियो भन्नेकुरा त बुझेको रहेछ नि । मीराले फेरी भनिन: '' अब आजदेखिनै सकारात्मक कुराहरुमात्रै हेर्ने गर । पहिले केहीहप्ता अगाडिजस्तो केही गुनासो गरेर, रिसाएर र दिक्कमानेर केही फाईदा छैन''।